Askari boolis ah oo nin 70 jir ahaa u dilay sigaar oo dil toogasho ah lagu xukumay - Calanka.com
Maxkamadda Ciidamada Soomaaliya ayaa maanta xukun ku riday Nuur Daahir Geedi, – ina Caasiro Maxamuud Xuseen – oo 29 sano jir ah, kuna dhashay Gaalkacy – kaas oo lagu helay inuu “dil bareer ah u geystay Cumar xasan Macallim.
Ninkan oo ka tirsanaa Saldhigga booliska Degmada Shangaani ee Muqdisho, ayaa lagu helay inuu “dil bareer ah ka geystay degmada Xamar-jajab”. Ninka dilka loo geystay oo lagu magacaabay Cumar xasan macallim ayaa u dhintay dhowr xaboo sigaar ah aawadood.
Gudoomiyaha maxakamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, Xasan Cali Nuur Shuute ayaa yiri: “Maxkamadda waxay aragtay caddeynta uu soo gudbiyay xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida; Waxay dhageysatay qiraalka Nuur Daahir Geedi uu ka hor caddeeyay garsoorka; waxayna dhageysatay maxkamaddu marqaatiyaasha.”
Sida uu sheegay Koroneel Shuute, marqaatiyaasha maxkamadda hortagay waxay sheegeen in “askeriga uu lacag jeexan uu doonayay inuu sigaar ku iibsado balse loo diiday. Ka dibna uu la soo noqday isagoo qori sita, sigaarkiina xoog ku qaatay.
“Markii uu Cumar waydiistay inuu sigaarka u dhigo, laba xabo ayuu ugu jawaabay oo mid ka mid ah ay wejiga kaga dhacday marxuumka dhintay”.
Koroneel Shuute oo ku dhawaaqay go’aanka ayaa yiri: “Maxkamadda waxaa u cadaatay in eedeysane Nuur daahir Geedi uu yahay dambiile geystay dembiga lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah. Waa qisaasta marxuum Cumar Xasan Macallim. Cidii aan ku qanacsanayn go’aanka maxkamadda, waxaa u furan racfaan”, ayuu yiri Gudoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya.